शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन चुनौतीहरु
– शान्ति स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ विगतमा गरिएका सहमती, समझदारी र संझौताहरुको आत्मसमीक्षात्मक पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । ती सबैको कार्यान्वयनको समीक्षा गरिनुपर्छ ।
– अन्तरिम संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार माओवादी सेनाका लडाकुहरुको ‘रेखदेख, समायोजन र पुनस्र्थापना’का लागि प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरु सम्मिलित ‘विशेष समिति’लाई कृयाशील पारिनु पर्छ । पछिल्लो समयमा आम रुपमा यो ‘समिती’ कृयाशील देखिए पनि हालका दिनमा माओवादी पक्षको अनिच्छा तथा निस्कृय भूमिकाका कारण यसको कृयाशीलतामा कमी देखिएको छ । शान्ति प्रकृयालाई सार्थक निस्कर्षमा पु¥याउनका लागि गरिएको ‘विशेष समिति’को संवैधानिक व्यवस्थालाई कुनै पनि हालतमा कमजोर बन्नदिनु हुन्न ।
– ‘विशेष समिति’ ले संवैधानिक प्रावधानअनुसार नै माओवादी सेनाका लडाकुहरुमाथि ‘नियन्त्रण र निर्देशित तथा समायोजन तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी विस्तृत ‘कार्ययोजना’ पारित गरी त्यस आधारमा शान्ति प्रकृयासित गाँसिएका सम्पूर्ण कामहरुलाई निश्चित समयावधिमा सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढाउनु पर्छ । यसका लागि ‘विशेष समिति’ले अलिकति पनि ढिलाइ नगरी आफूले गरेका निर्णयहरुको तदारुकता र प्रभावकारी किसिमले कार्यान्वयनका लागि ‘सचिवालय’ गठन र त्यसको ‘संयोजक’ तोक्ने काम गरिहाल्नु पर्छ । सचिवालयको ‘संयोजक’ तोक्ने कामलाई अहिले चलिरहेको सहमतीको राजनीतिमा सत्तासाझेदारीको आम विषय बनाइनु हुन्न – बन्न दिनु हुन्न । ‘संयोजक’ वास्तवमा समायोजन र पुनस्र्थापनको वृहद् र ऐतिहासिक कामलाई राम्ररी बुझेको, अनुभवी, सुरक्षा सम्बन्धी पेशागत दक्षता भएको व्यक्ति तोकिनु पर्दछ । ‘सचिवालय’ले ‘विशेष समिति’ले गरेका निर्णयहरुको मर्म तथा भावनालाई बुझी कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । यसरी गठन हुने सचिवालय (जसको गठनका लागि ‘विशेष समिति’मा नीतिगत सहमती भइपनि सकेको छ) र तोकिने ‘संयोजक’ वास्तवमा शान्ति प्रकृयासित सम्बन्धित भएका निर्णय र योजनालाई ठोस किसिमले कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने महत्वपूर्ण माध्यम हुन् । त्यसैले यसको गठनमा यही गंभीरताका साथ सोचिनु पर्छ ।
– ‘संभाव्य समायोजन’ का लागि ‘मापदण्ड’को विषयका बारेमा पनि स्पष्ट दृष्टिकोण तर लचकतापूर्ण हुन आवश्यक छ । सुरक्षा अंगका ‘स्थापित मापदण्ड’मा उभिएर नै ‘समायोजन’का विषयलाई अगाडि बढाइनुपर्छ । तर सुरक्षा अंगहरुमा सामान्य भर्नाका लागि अपनाइने ‘मापदण्ड’लाई जस्ताका तस्तै मात्र लागु गर्न खोज्नु वा त्यसैमा मात्र अडिनु पर्छ भन्नु उचित हुन्न । ‘सुरक्षा अंगहरु’ मा भर्ना नै हो, तर यो तर यो ‘सामान्य भर्ना’ नभएर ‘समायोजन’ अन्तरगतको भर्ना भन्ने कुरालाई पनि बुझ्नुपर्छ । यसको अर्थ सुरक्षा अंगका ‘स्थापित मापदण्डहरु’मा केही ‘अतिरिक्त स्थिति’लाई पनि स्वीकार गरिनुपर्छ ।
– ‘संभाव्य समायोजन’का लागि संख्याको विषय पनि सार्वजनिक रुपमै बहसको विषय बन्न वा बनाइन खोजिंदैछ । संख्या एउटा महत्वपूर्ण विषय त हुँदै हो तर मापदण्ड अन्तरगत समायोजन गर्ने कुरा चाहिं प्रमुख कुरा हो ।
– ‘समायोजन’ कसरी ? व्यक्तिगत रुपमा वा समूहगत रुपमा ? यो विषय एउटा बहसको विषय त हो (वा हुन सक्छ) तर यसलाई पनि केही बुझेर – केही नबुझेर बहस (वा विवाद ?!) बनाउन खोजिंदै पनि छ । अहिले माओवादी लडाकुहरु समूहमा (शिवीरहरुमा) बस्दै आएका छन् । समायोजनका लागि उनीहरुले व्यक्तिगत रुपमै तय गरिएका ‘मापदण्डहरु’ पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । र, यसरी ‘मापदण्ड’ पुरा गर्नेहरु ‘समायोजन’को विशिष्ट स्थितिका कारण कहेी समयका लागि सुरक्षा अंगका तल्ला इकाइहरुमा सामूहिकै रुपमा पनि रहन सक्छन् । पृष्ठभूमि र मनस्थितिका कारण पनि यस्तो गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर सम्बन्धित सुरक्षा अंगको एकीकृत कमाण्डर योजना अन्तरगत रहेर उनीहरु व्यक्तिगत रुपमै जुनसुकै ठाउँमा पनि परिचालित हुनै पर्ने कुरा स्वतः सिद्ध छ)
– पुनस्थापनको विस्तृत प्याकेजका विषयमा ‘विशेष समिति’मा र त्यसको ‘सचिवालय’मा विशेष छलफल गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यसमा स्थिति र व्यावहारिकतालाई ख्याल गरेर उदारता र फराकिलो दृष्टिकोणका साथ छलफल गर्दा प्रस्तावलाई थप राम्रो बनाउन सकिन्छ ।
– जहाँसम्म ‘स्वैच्छि विदाइ’ को विषय छ – त्यस्ताहरुलाई राज्यको तर्फबाट दिइने ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ लाई व्यावहारिक, तर्कसंगत, न्यायोचित र स्थिति सापेक्ष कसरी बनाउने भन्ने बारेमा सोच्नै पर्ने हुन्छ । राज्यको तर्फबाट दिइने ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’का अनेक अवस्था, रुप छन् (हुन्छन्) भन्ने कुरालाई पनि ख्याल गर्नैपर्छ । तर यो विषय व्यवस्थामा गर्नुपर्ने समग्रता महत्वपूर्ण भएपनि धेरै ठूलो र समस्याजनक हुन सक्तैन ।
– शान्ति प्रकृयासित गाँसिएका माथि उल्लेखित महत्वपूर्ण विषयहरुमा केन्द्रीत भएर नै समाधान खोजिनु पर्छ । राजनीतिक नेतृत्व तहबाट यी विषयमाथि जिम्मेवारीपूर्ण सोच र प्रस्ताव अघि सारिने हुन् भने यी समाधान हुनै नसक्ने विषय बन्नै सक्तैनन् । जहाँसम्म ‘सत्ता साझेदारी’सित यी सबै विषयलाई गाँसेर मात्र समाधान निकाल्न खोज्ने हो भने पनि राजनीतिलाई बुझ्न सक्नु पर्दछ । आफ्नो दल वा आफू (नेता विशेष) केन्द्रीत भएर सोच्ने– त्यस आधारमा समाधानको खोजी गर्ने हो भने समस्या रहन सक्छ । तर सिङ्गो राष्ट्र, सम्पूर्ण नेपाली जनता, लोकतान्त्रिक आन्दोलन तथा त्यसबाट प्राप्त उपलब्धीहरुको रक्षा तथा सुदृढिकरणको विषयलाई केन्द्र भागमा राख्ने हो भने सबैलाई स्वीकार्य ‘मोडेल’लाई पनि अगाडि ल्याउन सकिन्छ ।